CO2 Laser tingcha Machine Factory - China Co2 Laser tingcha Machine Manufacturers, Suppliers
Dika ihe siri ike nke usoro ichoputa ihe di ike, ihe ndi ozo na ndi mmadu na-egbochi ya site na akụrụngwa na teknụzụ, na ihe nkenke nke ihe edozi ya di ala, nke na emetuta ogo nke ngwaahịa a ruo n'ókè ụfọdụ, ọbụnakwa na-emetụta uru akụ na ụba.
Dị ka elu ume njupụta na operability nke laser, elu-ọsọ laser ọnwụ osise igwe nke XP usoro e ọma mepụtara na ndabere nke ọtụtụ afọ nke mmepụta nke laser akụrụngwa. Akụrụngwa ahụ nwere ọtụtụ ihe nhazi, ihe nkwụsị dị nro, enweghị nsị, enweghị polishing, enweghị mkpọtụ, enweghị ntụ, uzuzu nhazi ngwa ngwa, oke nkenke, obere mkpofu na arụmọrụ dị elu. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ụlọ ọrụ niile na nnọchi.
1313 Igwe Laser
Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na-abụghị ọla. Idlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ aka, ihe eji egwuri egwu, uwe, ihe owuwu, nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ, wdg.
1) Iche iche, dị mfe itinye n'ọnụ ụzọ dị warara (ọbụlagodi 80cm obosara).
2) A na-esi na Taiwan (Shangyin na CSK) webata okporo ụzọ nduzi niile na ụzọ izizi mbụ ejiri sliders.
Laser osise na ọnwụ igwe Laser n'ọnọdu na ọnwụ onu ọnwụ igwe njikọ yiri: Product nlereanya SY 1610 [Pụrụ iche nlereanya support ahaziri]
Ihe edere na-eduzi okporo ụzọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na ọkwọ ụgbọ ala dị elu iji mee ka mbepụ ahụ dị mma ma na-enweghị atụ; Integratedmụta mejupụtara etiti imewe imewe ka igwe na-agba ọsọ nwayọọ na-enweghị mkpọtụ; Mfe ọrụ, nhọrọ ịkpụzi usoro, nhazi larịị, mgbanwe ukpụhọde nke laser ike, ọsọ na Baịbụl hiwere isi n'ebe ogologo maka obodo ma ọ bụ niile otu oge mmepụta; Open software interface, dakọtara na Autocad , Coreldraw, goai ọkpụkpụ, Photoshop na ndị ọzọ na vector ndịna-emeputa imewe software; Onwem na mmiri nkwụsịtụ n'echebe, mma chebe laser, ịgbatị ndụ nke laser, nhọrọ ụkwụ pedal mgba ọkụ, mee ka gị na ọrụ ndị ọzọ adaba na ngwa ngwa. Ọmarịcha mma; Super ike ígwè efere, ulo oru ọkwa; Na-arụ ọrụ nke ọma maka ọrụ dị mma na ndụ ọrụ nke akụrụngwa; Ntughari uzo uzo abuo; Mgbaaka belt; Nwere ike ịhọrọ hazi ebuanu / okporo / okporo / ewepụghị / inwego;
Patented technology: pụrụ iche elu-ala na ala-draft anwụrụ ọkụ na ájá mwepụ usoro; Nchedo na-egbu ọkụ; Ihe ndị e ji egbu osisi.
Laser osise na ịcha igwe Laser n'ọnọdu na ọnwụ onu ọnwụ igwe njikọ yiri kwa: Product model SY 3040-6090-1390-1313-1414-1610-1325 [Pụrụ iche nlereanya support ahaziri]